Denmark oo 100 dhalinyaro Somalia ah ku celinaysa Magaalada… |
Denmark oo 100 dhalinyaro Somalia ah ku celinaysa Magaalada…
Dhalinyaro Somaliyed oo si qaxooti ah hada ku jooga dalka Denmark, ayaa sheegay inay ku xiran yihiin Xero ciidan oo ku taallo dalka Denmark, halkaasi oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan.
Dhalinyaradaan ayaa sheegay in Dowladda Denmark ay u sheegtay in dib loogu celinaayo dalka Somalia, waxaana ay sheegeen in arintaasi ay dhibaato ku tahay, maadaama xilligan aysan u diyaarsaneyn in dalka Somalia ay dib ugu soo noqdaan oo kolkii hore dhibaatooyin dalka ka jira awgiis ay uga carareen.
Yuusuf Cumar Bashiir oo ka mid ah dhalinyarada sheegtay inay ku xiran yihiin Xero ciidan oo ku taallo dalka Denmark, ayaa tilmaamay inay haysato dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah, isaga oo sheegay in heshiis ay wada gaareen Dowladda Somalia iyo Dowladda Denmark ay keentay sababta Somalida dib loogu celinaayo.
Wuxuu fariin baaq ah u diray Dowladda Somalia, gaar ahaan Xeer ilaaliyaha Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo uu sheegay in arintaan ay mudan tahay in wax laga qabto intii aanan dhalinyaradaan Soomaalida ah dib loogu celin dalka Somalia.
“Boqol dhalinyaro ah kor ayaan u dhaafeynaa dhibaatooyin ayaa nagu haysta waxaan ku xiranahay Xero Milateri oo Banaanka Magaalada ku taallo oo aan ku dhibanahay, Somalia ayaa la idiin celinayaa ayaa nala dhahay, marka waa heshiis ay wada gaareen Dowladda Somalia iyo Denmark, arintaasi dhibaato ayeey nagu tahay.” Ayuu yiri Yuusuf Cumar Bashiir oo ka mid ah dhalinyarada Somalia ee dalkaasi Denmark ku xiran.
Horay Dowladda Denmark, waxa ay Magaalada Muqdisho dib ugu soo celisay afar wiil oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo Warbaahinta u sheegay in sababta dalka dib loogu soo celiyay masuul uu ka yahay Taliyaha waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Somalia C/laahi Gaafoow Maxamuud oo heshiis la galay Dowladda Denmark.
Arintaan ayaa ah mid niyad jab iyo dhibaato ku ah Soomaalida kale ee dalka Denmark ku sugan oo wadnaha farta ku haayo, xilli dalka Somalia ee dib loogu soo celinaayo dhalinyarada weli ay ka taagan tahay dhibaatooyinkii markii hore ay ka carareen